iMovie ကို iMacs အသစ်အတွက် 4K ဗီဒီယိုအထောက်အပံ့ဖြင့် update လုပ်သည် ငါက Mac ကပါ
iMovie ကို iMacs အသစ်အတွက် 4K ဗီဒီယိုအထောက်အပံ့ဖြင့် update လုပ်သည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | iMac, Mac က App Store ကို, Mac OS X ကို
iMovie Mac အတွက် ထောက်ခံမှုဆောင်တတ်၏တဲ့သိသာထင်ရှားသောအသစ်က update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် 4Kနှင့်ထောက်ခံမှု Full HD ဗီဒီယိုများကိုတစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ နှုန်းဖြင့်ရိုက်သည်။ ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iMac 21″ Retina 4K display အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ရန် y 4K ရုပ်ရှင်တွေဝေမျှပါ။ အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည် 10.1 ဗားရှင်း, iMovie အသစ် update သည် Retina Displays အသုံးပြုသူများကို iMacs ပေါ်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသော 4K display နှင့် MacPro ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဗွီဒီယိုများကို 4K resolution ဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ.
iMovie ဗားရှင်းအသစ်သည်အောက်ပါတို့ကိုယူဆောင်လာသည် ဇာတ်ကောင်:
ရုပ်ရှင်များကိုဖန်တီးမျှဝေပါ မယုံနိုင်လောက်အောင် resolution နှင့်အတူ 4K ထောက်ပံ့ထားသော Mac ကွန်ပျူတာများ (3840 x 2160)
ရုပ်ရှင်များကိုဖန်တီးမျှဝေပါ ဗွီဒီယိုဖိုင်နှင့်အတူ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ ဘောင်ဖြင့် HD 1080p နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ပိုပြီးလျော့ပြေနှင့်သရုပ်မှန်ခံစားပါ။
iMovie မှရုပ်ရှင်နှင့်နောက်တွဲများမှ iOS အတွက်ဗားရှင်း ၂.၂ နှင့်နောက်ပိုင်းတင်သွင်းပါ၊ သင်၏ပရောဂျက်များကို iOS ကိရိယာဖြင့်တည်းဖြတ်ပါ y တစ် mac အပေါ်တက်အဆုံးသတ်.
မြင်ကွင်း အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် ဒါကြောင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုလှော်လှော်ကြည့်ရင်းသင့်စာကြည့်တိုက်ကိုပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
မြင်ကွင်း စီမံကိန်းများ ရုပ်ရှင်နှင့်နောက်တွဲများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေ။ ဖွင့်နိုင်သည်။
အ browser tabs များ ရုပ်ရှင်ကိုတည်းဖြတ်နေစဉ်ခေါင်းစဉ်များ၊ နောက်ခံများ၊
အတွက်ရွေးချယ်စရာ browser ကိုဖျောက်ပါ ရုပ်ရှင်၏တည်းဖြတ်စဉ်အတွင်း။
နောက်ထပ်ဗီဒီယို filter ၁၀ ခု iOS အတွက် iMovie ။
ရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းဖြတ်နေစဉ်သင်၏ 4K ဗွီဒီယိုများကို pixel ဖြင့်ကြည့်ပါ Retina 5K display နှင့်အတူ iMac.
မသန်စွမ်း ထုတ်ကုန် 4K ဗီဒီယို၊ Mac 2011 နှင့်ထိုထက်နောက်လိုအပ်ပါသည် နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူ RAM4GB။ 4K ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို Retina display နှင့် Mac Pro ကွန်ပျူတာများရှိ (iMac) ကွန်ပျူတာများတွင်ဖွင့်နိုင်သည် (၂၀၁၃ သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း) 4K display နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
iMovie အားဖြင့် Mac App Store တွင်ရနိုင်သည် € 14,99။ ၎င်းသည် Final Cut Pro X ၏အစ်ကိုဖြစ်သည် € 299,99။ Final Cut Pro X တွင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ ၎င်းသည် iMovie ထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးစွမ်းအားလည်းပိုသည်။ သို့သော် iMovie ကိုယ်တိုင်ကဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အသစ်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » iMac » iMovie ကို iMacs အသစ်အတွက် 4K ဗီဒီယိုအထောက်အပံ့ဖြင့် update လုပ်သည်
Jobs က Wozniak အား Apple ကွယ်လွန်ခြင်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်း Apple သို့ပြန်လာရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်
iMac အသစ်၏ Fusion Drive တွင် 1TB ပါသော option သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့နည်းစေသည်